UNICEF oo Ka Digtay In Caruurtu Isticmaasho Internetka. – Shabakadda Amiirnuur
UNICEF oo Ka Digtay In Caruurtu Isticmaasho Internetka.
December 11, 2017 8:49 am by admin Views: 169
Hay’ada dhalaanka aduunka UNICEF ayaa ugu baaqday shirkadaha dhanka Tiknoolajiyada in ay qaadaan tallaabooyiin dheeraad ah oo da’yarta loga ilaalinayo waxyeelada Internetka.
Hay’adda UNICEF ayaa sheegtay in maalin waliba in ka badan 170,000 oo Carruur ah ay markii ugu horeysay isticmaalaan internetka.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in ay sare u kacday caruurta isticmaala bogaga wax lagu qor .
Hay’ada caruurta ayaa imika ku baaqaysa in sare loo qaado aqoonsiyada lagu hubiyo da’da dadka isticmaala Internetka.
Warbixinta ay soo saartay UNICEF ayaa soo jeedinaysa in marka Caruurta ay isticmaalayaan baraha bulshada ay shirkaduhu ay heerka ugu sareeyaan gaarsiiyaan ilaalinta macluumaadka gaarka ah ee Carruurta.
Halis badan ayaa caruurta uga iman karta isticmaalka Internetka siiba dhanka tarbiyadooda, waxaana warbixintan ay kusoo aadeysaa iyadoo dhowr sannadood ka hor halista arrintan ay ka hadleen culimo Soomaaliyeed.
Caruurta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee Soomaaliya ayaa haatan u muuqda kuwa ka tarbiyo wanaagsan caruurta isticmaasha Internetka, tanina waxay ka dambeysay markii Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay dhowr sannadood ka hor mamnuucday Internetka.